အစိုးရနှင့်် ဟက်ကာတွေ သင့်ရဲ့ ဘယ်လို အချက်အလက်တွေကို စောင့်ကြည့်နေကြသလဲ - Latest Myanmar News
October 9, 2019 Latest Myanmar News ဗဟုသုတ 0
Intellistreets ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဒီမီးတိုင်တွေဟာ ကင်မရာနဲ့ လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံစနစ်တွေတပ်ဆင်ထားပြီးတော့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းပါတယ်။
ဒီ လမ်းမပေါ်ကမီးတိုင်တွေဟာ အလင်းရောင်ပေးနိုင်ရုံတင်မကပါဘူး။ ကြေငြာတွေ သီချင်းတွေ အရေးပေါ်အချက်ပေးစနစ်တွေ ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်တဲ့ မီးတိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတပ်ထားတဲ့ ကင်မရာတွေကလည်း ရာဇဝတ်သားတွေကို အချိန်မရွေးခြေရာခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဒီမီးတိုင်မှာဆိုရင် ကင်မရာတွေပါဝင်တဲ့အပြင် မိုက်ခရိုဖုန်းတွေလည်းတပ်ထားတော့ အစိုးရဟာ သင့်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး ..။ သင့်အသံကိုအမြဲတမ်းလည်းနားထောင်နေတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။
၂. လမ်းပေါ်က CCTV ကင်မရာများ
၂၀၁၂ ခုနှစ် စစ်တမ်းအရ ချီကာဂိုမြို့တစ်ဝိုက်မှာ CCTV ကင်မရာပေါင်း ၁ သောင်းကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီအရေအတွက်ဟာ နှစ်စဉ်နဲ့အမျှတိုးလာပြီးတော့ လုံခြုံရေးကင်မရာတွေလည်း တဖြည်းဖြည်း အဆင့်မြင့်သထက်မြင့်လာကြပါတယ်။ ဒါတွေကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ချိုးဖောက်ခံရသလိုခံစားရနိုင်ပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို အလုံးစုံသိနိုင်တာပေါ့။ ဒီလိုမျိုး ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားခဲ့တာကြောင့် ဒုစရိုက်မှုအတော်လေးကို လျော့ပါးသွားခဲ့တယ်။
၃. ဘတ်စ်ကားပေါ်က အသံဖမ်းစက်များ
တချို့မြို့တွေမှာဆိုရင် ဘတ်စ်ကားပေါ်က လူတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့ စကားတွေကိုနားထောင်ဖို့အတွက် ရုပ်သံဖမ်းစက်တွေလျို့ဝှက်တပ်ဆင်ထားတယ်။ ဆန်ဖရန်စစ်စကို ၊ ဘက်တီမိုး ၊ ဒက်ထရိုက် ၊ ဟက်ဖော့ ၊ ကွန်ကော့ နဲ့ ဘော်စတွန်မြို့တွေမှာဆိုရင် အခုလိုရုပ်သံဖမ်းစက်တွေတပ်ဆင်ဖို့အတွက် စနစ်အားလုံးကခွင့်ပြုထားတယ်။
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ရုပ်သံဖမ်းစက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် သင်ဘယ်သွားလဲ ဘယ်သူတွေနဲ့ဘာတွေပြောလဲဆိုတာကို စစ်တမ်းယူထားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ဒါဟာ တရားမဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒုစရိုက်မှုတွေလျော့ကျလာအောင် တပ်ဆင်ထားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကာကွယ်ရေးအစိုးရက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သင့်သူငယ်ချင်းဆီကို သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုအကြောင်း အီးမေးပို့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသင့် Browser မှာ အဲ့ဒီ ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ကြေငြာတက်လာတာမျိုးကြုံဖူးလား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အီးမေးဆားဗစ်တွေဟာ ကြေငြာတွေ ဖြန့်ဝေဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ အီးမေးကို Scan ဖတ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ သူတို့တင်ပဲမကဘူး ၊ FBI နဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့မဆို အီးမေးတွေကိုဖောက်ဖတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
၅. RFID မိုက်ခရိုချပ်စ်
အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာ စစ်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားတွေရဲ့ကျန်းမာရေး နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက် RFID ဆိုတဲ့ မိုက်ခရိုချပ်စ်တွေကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ရုပ်ရှင်ဆန်လွန်းနေပေမယ်လည်း တကယ်ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုပဲ။
အခု ကျွန်တော်တို့ကိုင်ထားတဲ့ ဘဏ်ကဒ်တွေ ခရက်ဒစ်ကဒ်တွေနဲ့ အကောင်လေးတွေမှာထည့်ပေးထားရတဲ့ကဒ်တွေမှာလည်း ဒီချပ်စ်တွေပါဝင်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက အဲ့ဒီချပ်စ်တွေဟာ သင့်ရဲ့တည်နေရာကို ရှာဖွေဖို့အတွက်သုံးနိုင်တဲ့အရာတွေပါ။ မကြာခင်မှာ ဒ်ီချပ်စ်တွေ လူ့ကိုယ်ထဲထည့်လာနိုင်တော့မယ်လို့ယူဆရတာပဲ။ တက္ကဆတ်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းဟာဆိုရင် ကလေးတွေအန္တရာယ်ကင်းလုံခြုံစေဖို့အတွက် ဒီနည်းလမ်းစမ်းသပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါပြီ…။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ကာကွယ်မှုတစ်ခုလား..ဒါမှမဟုတ်…ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဝင်စွက်မှုတစ်ခုလားဆိုတာတော့ သင်ပဲတွေးကြည့်ပေါ့ဗျာ….။
အစိုးရက သင့်ဖုန်းကင်မရာကတစ်ဆင့်သင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီး သင့်ပြောသမျှတွေကိုနားထောင်နေတယ်လို့ထင်ချင်ထင်လိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ သူတို့က ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပဲယူတာ။ သင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ခေါ်တဲ့နံပတ် ကြာချိန် ရက်စွဲ တည်နေရာ ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖုန်းရဲ့စနစ်က ဖုန်းထဲမှာသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင်စိတ်ပူရမှာက ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပဲ..ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ စကားပြောခဲ့သလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပဲစိတ်ပူရမှာဖြစ်တယ်။
ဟက်ကာတစ်ယောက်အတွက်တော့ သင့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာက Webcam တွေ မိုက်ခရိုဖုန်းတွေ ကို ဟက် ပြီး သင့်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ုဖို့ဆိုတာ အရမ်းကိုလွယ်လွန်းအားကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်း သင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ တရားခံကတော့ သာမန်ဟက်ကာတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ဘူး..FBI ပါပဲ။ GUMFISH လို့ခေါ်တဲ့ spytool ဟာဆိုရင် သူဝင်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာက ကင်မရာတွေမိုက်ခရိုဖုန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ဒီတော့ သင်တောင်မသိလိုက်ပဲနဲ့ သင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ သူတို့သိပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့။
Intellistreets ကထုတျလုပျလိုကျတဲ့ ဒီမီးတိုငျတှဟော ကငျမရာနဲ့ လှုပျရှားမှုအာရုံခံစနဈတှတေပျဆငျထားပွီးတော့ စှမျးအငျသုံးစှဲမှု ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးလြော့နညျးပါတယျ။
ဒီ လမျးမပျေါကမီးတိုငျတှဟော အလငျးရောငျပေးနိုငျရုံတငျမကပါဘူး။ ကွငွောတှေ သီခငျြးတှေ အရေးပျေါအခကျြပေးစနဈတှေ ထုတျလှငျ့ပေးနိုငျတဲ့ မီးတိုငျတှဖွေဈပါတယျ။ မွို့ပတျဝနျးကငျြမှာတပျထားတဲ့ ကငျမရာတှကေလညျး ရာဇဝတျသားတှကေို အခြိနျမရှေးခွရောခံနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
ဒီမီးတိုငျမှာဆိုရငျ ကငျမရာတှပေါဝငျတဲ့အပွငျ မိုကျခရိုဖုနျးတှလေညျးတပျထားတော့ အစိုးရဟာ သငျ့ကိုအမွဲတမျးစောငျ့ကွညျ့နရေုံတငျမဟုတျပါဘူး ..။ သငျ့အသံကိုအမွဲတမျးလညျးနားထောငျနတေယျဆိုတာသိနိုငျပါတယျ။
၂. လမျးပျေါက CCTV ကငျမရာမြား
၂၀၁၂ ခုနှဈျ စဈတမျးအရ ခြီကာဂိုမွို့တဈဝိုကျမှာ CCTV ကငျမရာပေါငျး ၁ သောငျးကြျောရှိပါတယျ။ ဒီအရအေတှကျဟာ နှဈစဉျနဲ့အမြှတိုးလာပွီးတော့ လုံခွုံရေးကငျမရာတှလေညျး တဖွညျးဖွညျး အဆငျ့မွငျ့သထကျမွငျ့လာကွပါတယျ။ ဒါတှကေိုတပျဆငျထားတဲ့အတှကျကိုယျပိုငျလှတျလပျခှငျ့ခြိုးဖောကျခံရသလိုခံစားရနိုငျပမေယျ့ အနညျးဆုံးတော့ ဖွဈပကျြခဲ့တာတှကေို အလုံးစုံသိနိုငျတာပေါ့။ ဒီလိုမြိုး ကငျမရာတှတေပျဆငျထားခဲ့တာကွောငျ့ ဒုစရိုကျမှုအတျောလေးကို လြော့ပါးသှားခဲ့တယျ။
၃. ဘတျဈကားပျေါက အသံဖမျးစကျမြား
တခြို့မွို့တှမှောဆိုရငျ ဘတျဈကားပျေါက လူတှကေိုစောငျ့ကွညျ့ဖို့နဲ့ စကားတှကေိုနားထောငျဖို့အတှကျ ရုပျသံဖမျးစကျတှလြေို့ဝှကျတပျဆငျထားတယျ။ ဆနျဖရနျစဈစကို ၊ ဘကျတီမိုး ၊ ဒကျထရိုကျ ၊ ဟကျဖော့ ၊ ကှနျကော့ နဲ့ ဘျောစတှနျမွို့တှမှောဆိုရငျ အခုလိုရုပျသံဖမျးစကျတှတေပျဆငျဖို့အတှကျ စနဈအားလုံးကခှငျ့ပွုထားတယျ။
ဘတျဈျကားပျေါမှာ ရုပျသံဖမျးစကျတှတေပျဆငျထားတဲ့အတှကျ သငျဘယျသှားလဲ ဘယျသူတှနေဲ့ဘာတှပွေောလဲဆိုတာကို စဈတမျးယူထားနိုငျစှမျးရှိတယျ။ ဒါဟာ တရားမဝငျတာမဟုတျပါဘူး ၊ ဒုစရိုကျမှုတှလြေော့ကလြာအောငျ တပျဆငျထားရခွငျးဖွဈတယျလို့ ကာကှယျရေးအစိုးရက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
သငျ့သူငယျခငျြးဆီကို သငျစိတျဝငျစားတဲ့ ပစ်စညျးတဈခုအကွောငျး အီးမေးပို့လိုကျပွီးတဲ့နောကျမှာသငျ့ Browser မှာ အဲ့ဒီ ပစ်စညျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ကွငွောတကျလာတာမြိုးကွုံဖူးလား။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အီးမေးဆားဗဈတှဟော ကွငွောတှေ ဖွနျ့ဝဖေို့အတှကျ သငျ့ရဲ့ အီးမေးကို Scan ဖတျဖို့ခှငျ့ပွုခကျြရထားပွီးသားဖွဈတယျ။ သူတို့တငျပဲမကဘူး ၊ FBI နဲ့ ကမ်ဘာပျေါက ဘယျအစိုးရအဖှဲ့မဆို အီးမေးတှကေိုဖောကျဖတျခှငျ့ရှိပါတယျ။
၅. RFID မိုကျခရိုခပျြဈျ
အမရေိကနျစဈတပျဟာ စဈပှဲအတှငျးမှာစဈသားတှရေဲ့ကနျြးမာရေး နဲ့ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးကိုစောငျ့ကွညျ့ဖို့အတှကျ RFID ဆိုတဲ့ မိုကျခရိုခပျြဈတှကေိုတီထှငျခဲ့တယျ။ ဒါဟာ ရုပျရှငျဆနျလှနျးနပေမေယျလညျး တကယျရှိနတေဲ့အရာတဈခုပဲ။
အခု ကြှနျတျောတို့ကိုငျထားတဲ့ ဘဏျကဒျတှေ ခရကျဒဈကဒျတှနေဲ့ အကောငျလေးတှမှောထညျ့ပေးထားရတဲ့ကဒျတှမှောလညျး ဒီခပျြဈတှပေါဝငျပါတယျ။
ပွောခငျြတာက အဲ့ဒီခပျြဈတှဟော သငျ့ရဲ့တညျနရောကို ရှာဖှဖေို့အတှကျသုံးနိုငျတဲ့အရာတှပေါ။ မကွာခငျမှာ ဒျီခပျြဈတှေ လူ့ကိုယျထဲထညျ့လာနိုငျတော့မယျလို့ယူဆရတာပဲ။ တက်ကဆတျကကြောငျးတဈကြောငျးဟာဆိုရငျ ကလေးတှအေန်တရာယျကငျးလုံခွုံစဖေို့အတှကျ ဒီနညျးလမျးစမျးသပျဖို့ စီစဉျနပေါပွီ…။ ဒါပမေယျ့ ဒါဟာ ကာကှယျမှုတဈခုလား..ဒါမှမဟုတျ…ကိုယျရေးကိုယျတာဝငျစှကျမှုတဈခုလားဆိုတာတော့ သငျပဲတှေးကွညျ့ပေါ့ဗြာ….။
အစိုးရက သငျ့ဖုနျးကငျမရာကတဈဆငျ့သငျ့ကိုစောငျ့ကွညျ့နပွေီး သငျ့ပွောသမြှတှကေိုနားထောငျနတေယျလို့ထငျခငျြထငျလိမျ့မယျ။ တကယျတမျးကတြော့ သူတို့က ဖုနျးထဲမှာရှိတဲ့အခကျြအလကျတှကေိုပဲယူတာ။ သငျဖုနျးချေါဆိုမှုတဈခုပွုလုပျတဲ့အခါမှာ ချေါတဲ့နံပတျ ကွာခြိနျ ရကျစှဲ တညျနရော ဒါတှအေကုနျလုံးရဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ဖုနျးရဲ့စနဈက ဖုနျးထဲမှာသိမျးထားလိုကျပါတယျ။ ဒီတော့ သငျစိတျပူရမှာက ပွောနတေဲ့အကွောငျးအရာမဟုတျပဲ..ဘယျသူနဲ့ ဘယျအခြိနျ ဘယျနရောမှာ စကားပွောခဲ့သလဲဆိုတဲ့အခကျြတှကေိုပဲစိတျပူရမှာဖွဈတယျ။
ဟကျကာတဈယောကျအတှကျတော့ သငျ့ရဲ့ ကှနျပွူတာက Webcam တှေ မိုကျခရိုဖုနျးတှေ ကို ဟကျ ပွီး သငျ့ရဲ့အခွအေနကေိုစောငျ့ကွညျု့ဖို့ဆိုတာ အရမျးကိုလှယျလှနျးအားကွီးတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး တကယျတမျး သငျ့ကိုစောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ တရားခံကတော့ သာမနျဟကျကာတဈယောကျတော့မဟုတျဘူး..FBI ပါပဲ။ GUMFISH လို့ချေါတဲ့ spytool ဟာဆိုရငျ သူဝငျထားတဲ့ ကှနျပွူတာက ကငျမရာတှမေိုကျခရိုဖုနျးတှကေိုထိနျးခြုပျနိုငျစှမျးရှိတယျ။ ဒီတော့ သငျတောငျမသိလိုကျပဲနဲ့ သငျဘာလုပျနလေဲဆိုတာ သူတို့သိပွီးသားဖွဈနတောပေါ့။
အပူကြောင့်် ဖြစ်သော မိတ်ပေါက်ခြင်းအတွက် ဆေးနည်း